सफल ढुंगेलहरु / एकै परिवारका चार संगीत यात्री (फोटो कथा)
मूलखबर। ओखलढुंगा लिखु गाउँपालिकाको पोकली / सुन्दर पोकली झरना रहेको स्थान। त्यहि जन्म भएको हो बरिष्ठ लोक गाएक नबिन ढुंगेलको । ‘काचो कटर हो निरजाले मै जान्छु राङ्गखोला रोक मोटर’- रेडियो नेपालमा यो लोक गाएर नेपालि लोक संगीतको दुनियामा प्रवेश गर्नु भएका बरिस्ठ लोक गाएक नबिन ढुंगेलको राङ्गखोला जान रोकेको मोटर अझै चल्दै छ। –नबिन […]
Posted in एक्सक्लुसिभ समाचार,मनोरञ्जन,साहित्य / कला मुख्य Read More »
देह व्यापार गर्ने यी १० बलिउड नायिकाहरु
एजेन्सी। नयाँदिल्ली / बलिउडमा अभिनेत्रीहरू देह व्यापारसँग जोडिएका समचार हाम्रा सामुन्ने थुप्रै आइसकेका छन् । तपाईहाम्रा लागि यो समाचार नयाँ नहुन सक्छ । उनीहरू देह व्यापारबाटै आफ्नो गुजारासमेत चलाउने गरेका छन् । यद्यपि केही नायिकाहरू देह व्यापारबाट बाहिर आउनै चाहँदैनन् । र व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन् पनि । यसको सूची बलिउडमा लामो छ । यी […]
लौरीको ट्रेलर सार्वजनिक, बादीको पीडा समावेश
मूलखबर। काठमाडौं,१३ असार। साउन ४ गते रिलिजको तयारीमा रहेको दीपक ओली निर्देशित फिल्म ‘पण्डित बाजेको लौरी’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । दाङ, बाँके, सल्यानसहितका जिल्लामा बसोबास गर्ने बादी समुदायको कथामा निर्माण गरिएको फिल्मका लेखक महेश दवाडी हुन् । कमेडी, प्रेम, बदला, द्वन्द्व मिसिएको ट्रेलरमा ‘‘बादी’ को कथाका झलक समेत देखाइएको छ । कलाकार विजय बराल […]
‘वीराङ्गना’को मसला एक्शन ट्रेलरमा यस्तो छिन् शिल्पा
मूलखबर। काठमाण्डौ अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल तथा अनुप विक्रम शाही स्टारर ‘वीराङ्गना’को एक्शनमय ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। असार २९ गते रिलिज हुने फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो। सार्वजनिक ट्रेलरले फिल्म मसला एक्शनले भरिएको देखाएको छ।फिल्ममा शिल्पा तथा अनुपका अलावा पृथ्वी राज प्रसाईं, धीरेन शाक्य, प्रज्वल गिरी, शुशिल पोखरेल, धु्रव कोईराला, प्रिया रिजालको अभिनय रहेको छ।यससँगै […]
Posted in एक्सक्लुसिभ समाचार,मनोरञ्जन,साहित्य / कला Read More »
मिथुन चक्रवर्तीले श्रीदेवीसँग पनि गरेका थिए बिहे
काठमाडौं । बलिउडका चर्चित डान्सर अभिनेता मिथुन चक्रवर्तीले स्व. श्रीदेवीसँग कुनै बेला गुपचुप बिहे गरेको रहस्य धेरे कमलाई मात्र थाहा छ । मिथुनलाई बलिउडमा ‘दादा’ भनिन्छ । आजदेखि ६६ बर्ष लागेका मिथुनबारे केही रोचक जानकारी । मिथुनलाई भारतको मनपर्ने ठाउँ ऊँटी हो । किनभने त्यस ठाउँमा उनका कयन फिल्म सुटिङ भइसकेका छन् । मिथुनकी पत्नी […]
म्याग्दी । शुभ कार्यमा परम्परागत रुपमा पुरुषले मात्रै बजाउने गरेको नौमती बाजा अब महिलाले पनि बजाउन थालेका छन् । पञ्चेबाजा बजाउने चलन हराउँदै जान थालेको समयमा पोखरामा बसोबास गर्ने म्याग्देलीले भने महिला र पुरुष दुवैको सहभागितामा नौमती बाजा बजाउने प्रचलनको शुरुवात गरेका हुन् । नौमती बाजा बजाउनेमा महिलाले मादल, दमाह र झ्याली बजाउने गर्छन् । विवाह, […]
‘नेपालको संगीत रोयल्टी अवधारणा एशियाली मुलुकमै उदारहणीय’
नेपालको संगीत रोयल्टी व्यवस्थापन मोडेल कस्तो होला? नेपाली प्रतिलिपि अभियन्तालाई आफूले बनाएको अवधारणा उचित लाग्छ नै। तर, विश्वका परिचित प्रतिलिपि अधिकार अभियन्ताले पनि नेपालको संगीत रोयल्टी व्यवस्थापन मोडेलको सह्राना गरेका छन्। प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी एशियास्तरीय प्रशिक्षणका लागि काठमाडौं आएका दक्षिण एशिया र युरोपेली मुलुकका प्रतिलिपि अधिकार अभियन्ताले नेपालको संगीत रोयल्टी व्यवस्थापन पद्धति नवीनतम् रहेको बताएका हुन्। […]
काठमाडौं, ३१ जेठ। नक्कली नोटसहित पक्राउ परेका फिल्म निर्माता माधव वाग्ले पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिव खनालको इजलासले वाग्लेसहित नगेन्द्र बोगटी र सुदिर घिसिङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। २ करोड ६० लाख नक्कली नोट कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरूसहित पक्राउ परेका प्रकाश सुवेदी र दिपेश नापीलाई अदालतले जनही […]
काठमाडौं ३० जेठ । वरिष्ठ कलाकार भीम बहादुर थापाको ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । ३० जेठ बिहान दुई बजेतिर उनको निधन भएको हो । पशुपति आर्यघाटमा थापाको अन्तिम संस्कार गरिने छ । थापाले झण्डै एक सयवटा चलचित्र र टेलीचलचित्रमा अभिनय गरेका छन् । वि.सं. १९८३ असार १३ गते खोटाङमा जन्मिएका थापाले ब्रिटिश आर्मीमा भर्ना […]
एक्सन लभ स्टोरी जनराको चलचित्र ‘वीराङ्गना’ को पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । पोष्टरमा कलाकारहरु अनुप विक्रम शाही, शिल्पा पोखरेल र पृथ्वी राज प्रसाईलाई प्रस्तुत गरिएको छ । पोष्टरमा शिल्पा पोखरेललाई एक्शन लुक्समा घोडा र बाँदरसँगै प्रस्तुत गरिएको छ । राजबहादुर सानेले निर्देशन गरेको चलचित्र नारी प्रधान रहेको बताइएको छ । चलचित्रमा शिल्पा, अनुप र पृथ्वी सँगै […]